စာအုပ်အမည် - တိမ်တွေ တောင်တွေနှင့် ခရီးသည်
စာရေးသူအမည် - လင်္ကာရည်ကျော်
ဒီနေ့အတွက် Chal ဆရာလင်္ကာရည်ကျော်ရဲ့ နောက်
ဖတ်ပြီးသားသူတွေ များမယ်ဆိုတာကို သိသိကြီးနဲ့ကို ချယ်ကလည်း ခေါင်းမာမာနဲ့ ထပ်ပြီး ပြောပြချင်သေးတာမို့ နည်းနည်းတော့သည်းခံပြီးဖတ်ပေးပါလို့ အရင်ဆုံး မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆရာရဲ့ “ပန်းဒေါင်း”ဝတ္ထုလေးပြီးရင် ချယ်အခုပြောပြပေးမယ့်
ဒါဆို ချယ်အခုစာအုပ်လေးအကြောင်း စပြောပြပါတော့မယ်ရှင့်…..
ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ ချယ်ကြိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေက အများကြီးပါပဲ။ (၁)လူတစ်ယောက်(ယောကျာ်းလေးဘဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးဘဲဖြစ်ဖြစ်) သူရဲ့အပေါ်ယံ ရုပ်ရည် ချောမောတာ၊ ရုပ်ဆိုးတာဟာ အရေးကြီးတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်၊ အရေးကြီးတာက အဲဒီလူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆဘဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အသက်(၁၉)နှစ် မပြည့် ခင်ထဲက ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်နားလည်ပြီး ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ ဆရာရဲ့ ဇာတ်ဆောင် ကိုရဲဝင့်က ပြောပြပေးသွားပါတယ်…….
(၂)ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အလကား တိမ်တွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူ၊ အခြောက်တိုက် ကြီးကျယ်နေတဲ့သူလို့ ပြောကြဆိုကြတာတွေ၊ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတာတွေကို ဂရုစိုက်မနေပဲနဲ့ အလုပ်နဲ့ဘဲ သက်သေပြသွားခဲ့တယ်……….
(၃)အောင်မြင်သွားပြန်တော့လည်း ရှိသင့်တဲ့လောဘနဲ့ဘဲ စီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ရှာတယ်၊ သိန်းတစ်ရာရပြီး စိတ်ပူနေမယ့်အစား တစ်သိန်းဘဲယူပြီး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေရဖို့လမ်းကိုဘဲ ရွေးခဲ့တယ်၊ မတော်လောဘဆိုတာ ရဲဝင့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာရော ခေါင်းထဲမှာပါမရှိခဲ့ပါဘူး……
(၄)ဝတ္ထုအလယ်လောက်က“မကောင်းမှုဆိုတာကို အနည်းငယ်ဆိုပြီး မထီမဲ့မြင် မပြုရာ”ဆိုတဲ့ ရဲဝင့်အမြဲလက်ကိုင်ထားတဲ့ စကားလေးကလည်း ချယ့်ရင်ထဲကို စွပ်ကနဲ့ တိုးဝင်သွားလေသေးရဲ့…….
(၅) နောက် ခုခေတ်လူငယ်တွေကြားထဲမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေပြီးရင် ကိုယ် မြန်မာလူမျိုးဆိုတာကို မေ့သွားတတ်ပြီး ကိုယ်နိုင်ငံဆိုရင် အထင်မကြီးတတ်တော့တာလေးတွေ၊ ကိုယ်တွေခုလို သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာ ပညာသင်နေကြတာဟာ ပြောရရင် ကိုယ့်အမိမြေတိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းအတွက်ဆိုတာ သတိရဖို့အကြောင်းကိုလည်း S ငါးလုံးနဲ့ ဆရာက ပြောပြပေးသွား ပါတယ်…
(၆) တစ်ဖက်က အချစ်ရေးမှာကျပြန်တော့လည်း သွေးသားအရင်းမဟုတ်တဲ့ မိထွေးပါသမီး စိမ်းဝေ လေးကို ကိုယ်ရဲ့နှမအရင်းလေးလိုဘဲ စောင့်ရှောက်ပေးချင်တဲ့ စိတ်အရင်းခံလေးနဲ့ ဥယျာဉ်မှုး တစ်ယောက်က ပန်းကလေးတစ်ပွင့်ကို မခူးရက်၊ မတို့ရက်ဆိုသလို ချစ်တဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ တန်ဖိုးထား ချစ်တတ်လွန်းခဲ့တယ်………..
ပြောရမယ်ဆိုရင် ဇာတ်ဆောင်နှစ်ယောက်လုံးဖြစ်တဲ့ ရဲဝင့်ရော စိမ်းဝေအတွက်ပါ အချစ်ဆိုတာ ၁၅၀၀ တွေ၊ ၅၂၈ တွေခွဲနေစရာမလိုအပ်ဘဲ အချစ်ဆိုတာနဲ့တင်ကို ပြီးပြည့်စုံနေတာမျိုးပါပဲ။
ချယ်အပါအဝင် ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်နေကြတဲ့ လူသားအားလုံးအတွက် ဘဝဆိုတာ တိမ်တွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေရ
တိမ်တွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတာ လွယ်တယ်လို့ထင်ပါသလား…….
ခြေလှမ်းယိုင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်၊ လဲပြိုကျတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်၊ ဆက်လျှောက်နေတဲ့ ခြေလှမ်း တွေကို ရှေ့ဆက်မတိုးချင်လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါတွေရှိမယ်၊ အဲဒီလိုအချိန်တွေ အများ ကြီးကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ခွန်အားတွေပြည့်ဝ နေဖို့ လိုပါမယ်ရှင့်……..
စာမျက်နှာ (၂၃၀)သာရှိတဲ့ ဒီလက်တစ်ဝါးစာကျော်ကျော် စာအုပ်လေးကို ဖတ်ပြီးသွားခဲ့ရင် ဘဝ မျက်နှာစာတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရတဲ့အခါ ခြေလှမ်းလေးတွေနှေးသွားတဲ့အခါတိုင်း၊ ဆက် လျှောက်ဖို့ အင်အားတွေ ကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါတိုင်း တစ်ချိန်က တိမ်တွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ကိုရဲဝင့်ကို သတိတစ်ချက်ရလိုက်ပါ………
ချယ်တို့လို လူငယ်တွေအတွက် စိတ်အာဟာရတွေ၊ ခွန်အားတွေ အများကြီးပေးနိုင်တဲ့ အခုလိုစာပေကောင်းတွေ ဆရာအနေနဲ့ နောက်ထပ် နောက်ထပ်အများကြီးရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်